Home Wararka Wafdi uu hogaaminayo Beeyle oo loo dirayo Sacuudiga si lacag looga soo...
Wafdi uu hogaaminayo Beeyle oo loo dirayo Sacuudiga si lacag looga soo baryo iyo Sacuudiga oo cadeeyay in ayan lacag bixin doonin
Dowlada Federaalka ayaa waxa ay wafdi u diraysaa dalka Sacuudiga, wafdigaas ayaa waxaa hogaamin doona Wasiir Maaliyadda Cabdirahman Beeyle si loogu soo qanciyo dowlada Sacuudiga in ay markale lacag ugu deeqdo Soomaaliya.
Dowlada Sacuudiga oo dhowr mar isku dayday in ay Soomaaliya taakuleysa, horayna lacag $50 Milyan u siisay dowlada Farmaajo ayaa albaabada ka soo xiratay Soomaaliya. Lacagtii horay loo bixyay ayaa waxaa ku tagrifalay Ra’iisal Wasaare Xassan Kheyre. Markii gudiga Maaliyadda ee Baarlamaanka su’aal ka keeneen halka ay ka baxday lacagtaas, gudigii ayaa la kala diray.
Dowlada Sacuudiga ayaa ka biyo diiday in ay mar kale lacag ku aaminto Soomaaliya inta Farmaajo iyo Kheyre hogaanka u hayaan.
Farmaajo ayaa marar badan balan fur ku sameeyay balamo uu horay uga qaaday dowlada Sacuudiga, Ra’iisal Wasaare Kheyre oo isna u muujiyay dareen ka duwan kii Farmaajo ayaa balan qaaday in uu saxayo khaladkii Farmaajo horau u galay. Nasiib xumo balan ka bixii Farmaajo mid ka daran ayuu isagana ku sameeyay madaxda Sacuudiga ee sida sharafta leh u soo dhaweeysay.
Sacuudiga ayaa marnaba markale rajo laga qabin uu Soomaaliya lacag ugu deeqo. Siyaabo kala duwan ayaa loogu sheegay Farmaajo iyo kooxdiisa go’aanka Sacuudiga oo ah in ay albaabda ka soo xirteen Soomalya hadana waxa muuqata in ayan wali quusan.
Sida ay noo xaqiijeen ilo ku dhow dowlada Sacuudiga, wafdiga uu dirayo RW Kheyre ayaa ceeb iyo fadeexad kala soo kulmi doono dalka Sacuudiga.